"शर्माजी" को लयमा शर्मा सरकारको टेढो नाँच - Rastriya Samachar
सोमवार, ६ फागुन २०७५ २२:२४
जसरी जीव जनावरहरुले भुकम्प जानु भन्दा पहिले नै थाहा पाउछन त्यसरी नै साहित्यकार हरुले पनि देश र समाज कता जादै छ भनेर पहिले नै चाल पाउछन । देशको राजनीति, शासन व्यबस्था, र अवस्थाले त्यो देशको कला साहित्यको निर्धारण गर्ने गर्दछ न कि साहित्य कस्तो हुने भनेर शासकले तोक्ने हो ।
रुवान्डा र हिटलरको नरशंहार ले गर्दा “Night र If This isaMen” जस्ता कृति जन्मिए । भारत र पाकिस्तानको युद्ध ले मन्टो का कथा लेखिए । श्रीलंकाको द्वन्दले Anil’s Ghost” लेखियो । दरबार काण्डले रक्तकुण्ड, दश बर्षे द्वन्दले पल्पसा क्याफे लेखियो । यसरी हेर्दा के देखिन्छ भने समाज जस्तो छ कला र साहित्य त्यस्तै हुन्छ ।
एउटा कला साधकको विचारलाई सामाजिक र राजनैतिक वातावरणले प्रभाव पार्ने गर्दछ । त्यसैले शासकहरु साहित्य र साहित्यकारहरुसंग डराएर लेखकको विचारलाई रोक्नु भन्दा त्यस्ता रचनाहरुबाट समाजमा के भैरहेको छ? जनताहरु ले के भनिरहेका छन् ? र अब कुन बाटो हिड्नु पर्छ भन्ने कुराहरुको मुल्यांकन गर्नु देश चलाउनेहरुको बुद्धिमता हुने गर्दछ । भनिन्छ नि कुनै पनि देश र समाज बुझ्न त्यो देशको कला र साहित्य बुझे हुन्छ । रेनेसा काल बुझ्न सेक्सपियरलाई पढे पुग्छ,
अहिले पशुपति शर्माको “लुट्न सके लुट कान्छा ……….” भन्ने गीतलाई लिएर जुन विवाद भैरहेको छ यसमा शर्मा (के.पी ) सरकारले के बुझ्नु पर्दछ भने यो गीत वर्तमान नेपालको यथार्थ हो । यो एउटा लेखकको सिर्जना हो र यो उसको कल्पना (Imagination ) गर्न पाउने हक हो । यसमा सरकारले कुनै किसिमको रोक लगाउन सक्दैन र हुदैन पनि । बरु सरकारले एउटा मार्गदर्शन को रुपमा लिनुपर्दछ । उक्त गीतका कतिपय शब्दहरुमा सरकार, सरकारी दल र ति दलका झोले र छातेहरुले आपत्ति जनाएर गायक लाई धम्कि सम्म दिएको पाइयो ।
ब्लैक ह्युमर, सटायर, फार्स, आदि लेख्दा पात्र र विषय हरु समाज भन्दा तल राखेर लेखिन्छ र त्यस्ता शब्दहरु नराम्रो लाग्न सक्छन त्यसैले एउटा गीतसंग सरकार डराएर कोकोहोलो मच्चाउनु किमार्थ उचित होइन । राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री केवल चम्चेहरुको त होइन होला ? सरकार चलाउनेहरुले बुझे हुन्छ त्यस्ता लौरेहरु त केवल १-२ % मात्र छन् र बाकी तिमीले पाएको भोट त अरु स्वतन्त्र मत हो तिनीहरुलाई पनि कदर गर्न सिक ।
गायकलाई त्यति निराश सोच्ने कसले बनायो? तिमी देश चलाउने भनाउदा हरुले होइन? आज सम्म जनताको लागि गरेको र घुस नखाएको कुन काम छ? साहित्यमा यस्ता शब्दहरु प्रयोग हुन्छन र ति शब्दहरु अपाच्य छैनन । माधब घिमिरे को गौरी मा पनि “मुडदारनी” शब्द प्रयोग भएको छ शर्मा के. पी. लाई थाहा नै होला केवल शब्द कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने हो । हेर्दा लाग्छ एउटा शर्मा को लयमा अर्को शर्मा सरकार टेढो नाच्दै छ ।
कला र साहित्य कमजोर हुनु र बनाउनु भनेको देश कमजोर हुनु हो । सरकारले कुन गीतका शब्द के रहे भन्ने हेरेर बस्नु भन्दा पनि ति कुराहरुबाट आफ्नो बाटो राम्रो बनाउनु पर्छ । रोला बार्थको “Death of Author” झैँ यो गीत मा अब पशुपति शर्मा मरिसकेका छन् र गीत सबै नेपालीको भैसकेको छ । त्यसैले शर्मा सरकारले शर्माजी को गीतमा दिए जति चासो देश हित र जनतामा दिए गाली हैन ताली पाइन्थ्यो होला ।